Bit By Bit - Fananganana fiaraha-miasa betsaka - 5.5.6 Final famolavolana toro-hevitra
Ankoatra ireo fitsipika dimy ireo, dia manolotra torohevitra roa hafa aho. Voalohany, ny fanehoan-kevitra mivantana izay mety atrehanao rehefa manolotra tetikasa fiaraha-miasa marobe dia "tsy misy olona mandray anjara." Mazava ho azy fa mety marina izany. Raha ny marina, ny tsy fahampian'ny fandraisana anjara no loza lehibe indrindra hiatrehana ny tetikasa fiaraha-miasa amin'ny ankapobeny. Na dia izany aza, io fisalasalana io dia matetika avy amin'ny fisainana momba ny toe-draharaha amin'ny fomba diso. Olona maro no manomboka amin'ny tenany ary miasa: "Be atao aho; Tsy hanao izany aho. Ary tsy fantatro na iza na iza hanao izany. Noho izany, tsy misy olona hanao an'izany. "Raha tokony hanomboka amin'ny tenanao sy ny fiezahanao kosa ianao dia tokony hanomboka amin'ny olona rehetra mifandray amin'ny Internet sy miasa. Raha iray tapitrisa amin'ireo olona ireo no mandray anjara, dia ny tetikasanao mety ho fahombiazana. Saingy raha iray monja amin'ny olona iray tapitrisa no mandray anjara, dia mety tsy hahomby ny tetikasanao. Satria tsy dia tsara ny manavaka ny iray amin'ny iray tapitrisa ary ny iray lavitrisa arivo tapitrisa, tsy maintsy manaiky isika fa tena sarotra ny mahafantatra raha toa ny tetikasa dia hahatonga ny fandraisana anjara ampy.
Mba hahatonga izany ho sarotra kokoa, andeha hiverina amin'ny Galaxy Zoo. Alao sary an-tsaina i Kevin Schawinski sy Chris Linton, astronoma roa nipetraka tao amina toeram-pisakafoanana tao Oxford nieritreritra ny Galaxy Zoo. Tsy ho voamariny na oviana na oviana no noheverina fa i Aida Berges, renim-pianakaviana mipetraka any Puerto Rico, dia hijanona ho sokajy vahindanitra an-jatony isan-kerinandro (Masters 2009) . Na hevero ny zava-nitranga tamin'i David Baker, ilay fikambanana miaro tena any Seattle dia manorina an'i Foldit. Tsy nihevitra mihitsy izy fa ny olona avy ao McKinney, Texas dia nantsoina hoe Scott "Boots" Zaccanelli, niasa androany ho mpividy ho an'ny orinasa fantsom-pandrefesana, dia handany ny takarivam-pandriany miolikolika, ary hipoitra amin'ny isa enina eo amin'ny Foldit. Zaccaenlli dia, tamin'ny alàlan'ny lalao, dia nanolotra tetikady ho an'ny varotra kokoa amin'ny fibronectine izay nahitan'i Baker sy ny tariny fampanantenana fa nanapa-kevitra ny hampifanaraka azy io ao amin'ny laboratoara (Hand 2010) . Mazava ho azy fa tsy misy atipika i Aida Berges sy Scott Zaccanelli, saingy izany no herin'ny Internet: misy olona an'arivony tapitrisa, mahazatra ny mahita ny tsy mitongilana.
Faharoa, raha sahirana ity fanambarana ity, te hampahatsiahy anao aho fa mety hampidi-doza ny famoronana tetikasa fiaraha-miasa marobe. Afaka mampiasa vola be ianao hananganana rafitra iray izay tsy hisy olona te hampiasa. Ohatra, i Edward Castronova-mpikaroka fanta-daza momba ny toekarena tontolo virtoaly, nahazoan-doka 250.000 dolara avy amin'ny MacArthur Foundation, ary nanohana ny ekipan'ny mpikirakira-efa ho roa taona no nanandrana nanangana tontolo virtoaly izay ananany dia afaka manao fanandramana ara-toekarena. Tamin'ny farany, ny ezaka manontolo dia tsy fahombiazana satria tsy nisy olona te-hilalao ao amin'ny tontolon'ny virtoaly Castonova; Tsy dia mahafinaritra loatra izany (Baker 2008) .
Noho ny fisalasalana momba ny fandraisana anjara, izay sarotra ny manafoana, manoro hevitra aho fa hiezaka hampiasa teknika fanombohana mibaribary ianao (Blank 2013) : manangona prototypes tsotra amin'ny fampiasana rindrambaiko malaza ary hijerena raha afaka maneho ny fampiasana azy ianao alohan'ny hampiasanao vola be fampandrosana rindrambaiko custom. Raha lazaina amin'ny teny hafa, rehefa manomboka pilotan'ny fisedrana ianao dia tsy hahita ny tetikasanao-ary tsy tokony hijery tsara toy ny Galaxy Zoo na eBird. Ireo tetikasa ireo, amin'izao fotoana izao, dia vokatry ny ezaka ezaka ataon'ny ekipa lehibe maro. Raha toa ka tsy mahomby ny tetikasanao-ary mety hitranga izany-dia te-hiala haingana ianao.